တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးများက တရုတ်နိုင်ငံ ကန်းစုပြည်နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကုသမှုအား အထောက်အကူပြုလျက်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကန်းစုပြည်နယ်၊ လန်ကျိုးမြို့ရှိ ကန်းစုပြည်နယ်ဆိုင်ရာ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးဆေးရုံ၌ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးများအား ဆေးစပ်ရန်ချိန်တွယ်နေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လန်ကျိုး၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကန်းစုပြည်နယ်တွင် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ (TCM) နှင့် အနောက်တိုင်းဆေးဝါးများအား ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ ရရှိလာသော အကျိုးကျေးဇူးဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၉ ဦးသည် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ ရောဂါအခြေအနေပြင်းထန်နေရာမှ အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ကန်းစုပြည်နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသည် ဒေသတွင်းကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာ ၁၀၅ ဦးရှိခဲ့ပြီး ယင်းအနက် ၈ ဦးမှာ ရောဂါအခြေအနေဆိုးဝါးပြီး ၂ ဦးမှာမူ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေ၌ ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါလူနာများအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးရုံများ၌ TCM ဆေးဝါးဖြင့် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည်။
ကန်းစုပြည်နယ် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပူးတွဲကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ Zhang Zhongde အဆိုအရ ပြည်နယ်အတွင်း နောက်ဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားမှု အတွင်း သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများစွာ ပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက် အများစုမှာ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါရှိသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကူးစက်လွယ် ဒယ်လ်တာ (Delta) ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကုသရပိုမိုခက်ခဲချိန်အတွင်း TCM ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ၎င်းက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုသမှုတွေမှာ အနောက်တိုင်းဆေးဝါးနဲ့ TCM ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ အဖျားကြီးတာကနေ ရောဂါပြင်းထန်မှုအဆင့်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
TCM ဆေးဝါးများသည် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်းနှင့် လည်ချောင်းနာခြင်း စသည့် ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေရန် အထောက်အကူပြုပေးကြောင်း၊ အဖျားရှိသော လူနာများအတွက်မူ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုကို ၃၆ နာရီမှ ၄၈ နာရီအတွင်း ရရှိနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကန်းစုပြည်နယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် TCM ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု အဓိကအခြေစိုက်ရာနေရာလည်းဖြစ်ပြီး တရုတ်ဆေးဝါးစနစ်တွင် အသုံးပြုသော ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း ရှည်ကြာလှသော သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့သည်။ TCM ဆေးဝါးအား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများ ကုသရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလျက်ရှိကာ ဆေးစွမ်းထက်မြက်သည့် သက်သေများလည်း ပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-02 08:33:21|Editor: huaxia
LANZHOU, Nov.2(Xinhua) — Benefitting from the combination of traditional Chinese medicine (TCM) and Western medicine, nine confirmed cases of COVID-19 have turned to moderate from severe as of Sunday in northwest China’s Gansu Province, local authorities said Monday.
“We have incorporated Western medicine and TCM in our treatment, effectively preventing the development of severe cases from becoming critically ill,” he said.
Gansu province isamajor TCM production base in China and hasalong history of growing herbs used in the Chinese system of medicine. TCM has been widely applied to treat COVID-19 patients in China and has proved effective. ■